Samachar Batika || News from Nepal » महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे लक्ष्मीको बास हुन्छ!
महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे लक्ष्मीको बास हुन्छ!
महिलाहरुले यस्ता कामहरु राति नगरेकै राम्रो –
१. सुर्यास्त पछि महिलाहरु कसैको घरमा पनि दुध, दही, नुन, तेल र प्याज लिन जानु हुँदैन । यसो गर्नाले उनीहरुको जीवनमा बा’धाहरु आउने गर्छन् र धेरै क’ष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. ज्योतिष शास्त्रका अनुसार महिलाहरुले सुत्नु अघि कपाल नुहाउनुहुँदैन । यस्तो गर्नु हा’निकारक हुन्छ ।
यी काम गरेमा फाइदा हुनेछ–
– रातमा सुत्नुअघि घरभित्र रहेको कुच्चो दक्षिण पश्चिम दिशामा लुकाएर राख्नुपर्छ । यसले धन लाभ गर्छ ।– राती सुत्नुअघि भान्छामा एक बाल्टी पानी भरेर राख्नुहोस् । यसले घरमा सुख–समृद्धिको बास गराउँछ । खाली बाल्टी राख्नुले घरमा चिन्ता भर्ने काम गर्छ ।
महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ त्यसैले महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ । तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन ।जुन हामीले माथी जानकारी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति ९ बैशाख २०७८, बिहीबार १३:५२